AOC na-ekwupụta ọkwa nkwado nke Global Esports na G2 Esports | Akụkọ akụrụngwa
Taa, egwuregwu e-egwuregwu na-aga n'ihu na-enweta ala n'ụwa niile na ka ihe a niile wee rụọ ọrụ, ọ chọrọ ndị a zụrụ azụ na ndị otu nhazi maka ịrụsi ọrụ ike. Dị ka ihe niile n'oge a, ịnwe ezigbo nkwado dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke otu ahụ ma na nke a AOC, na-abanye na nkwado nke G2 Esports.
G2 Esports, amụrụ na 2013 mgbe ọkachamara ọkpụkpọ Carlos "ocelote" Rodríguez guzobere ya. G2 Esports guzobere ngwa ngwa dị ka titan nke sekit Europe na mmemme egwuregwu e-mba dị iche iche., site na egwu dị egwu na utu aha 79 meriri.
Ọ bụ ndị a kwuru ọkwa gọọmentị AOC Onye isi ahia na njikwa ahia nke AOC Europe, Stefan Sommer, na nke a ọ na-akọwa na ha nwere afọ ojuju na ha bụ ndị nkwado nke G2 Esports:
Iso ndi otu ndi otu ndi otu ndi mmadu na-aru oru na-akpali anyi ma anyi bia iche echiche banyere ngwa ahia ma nyere anyi aka ichoputa udiri ndi ozo kwesiri kachasi nma ma obu aha ha. G2 na-enye akụrụngwa ọzụzụ na ọnọdụ magburu onwe ya maka ndị egwuregwu ya, yabụ na anyị enweghị ike ichere ibi ndụ na ebumnuche ya na usoro AGON anyị.
Carlos “ocelote” Rodríguez, onye nchoputa na onye isi nke G2 kwuru, sị:
Onye ọ bụla nọ na G2 Esports nwere obi ụtọ banyere mmekọrịta ya na AOC. Ntinye nke ndị na-egwu egwuregwu ọkachamara na mmepe nke ngosipụta egwuregwu kachasị mma dị mkpa ma anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu itinye kpakpando ụwa anyị n'aka ha iji nyere AOC aka inweta izu okè. Anyi amatago na usoro ohuru ohuru AGON AGON251FZ nyochaa nke oma nke oma gabu ihe di nkpa n’ime gburugburu ebe obibi anyi. Anyị maara karịa onye ọ bụla na talent na-enweghị ọrụ siri ike na omume abaghị uru. Anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na nkwenye a na mkpebi siri ike nke kachasị mma ga-eduga na mmeri na 2018. Ndị otu anyị na-agụ agụụ karịa mgbe ọ bụla ma anyị nwere obi ụtọ na anyị nwere ndị mmekọ ndị kwenyere n'ọchịchọ anyị ma na-anụ ọkụ n'obi mgbe niile inyere anyị aka inwe ọganihu.
A na-asọpụrụ G2 Esports ọ bụghị naanị maka ọganiihu ya na asọmpi mba ụwa na asọmpi, kamakwa maka ikpokọta talent ụwa na nke ọ bụla n'ọkwa, ndị a bụ League of Legends, CS: GO, Hearthstone, PUGB or Rocket League. Ugbu a, mbata nke nkwado a, a na-atụ anya na ihe ịga nke ọma a ga-enwe ga-aga n'ihu na-abawanye na karịa ihe niile n'ihi eziokwu ahụ bụ AOC na-egwu egwuregwu, ha bụ ndị kachasị ọsọ ugbu a. Na Febụwarị, G2 Esports guzobere CS: GO otu ama ama dịka "otu ndị otu egwuregwu French". Ha weghaara trophi na-ekpo ọkụ na 2017 DreamHack Masters na ESL Pro Series Season 5 - niile n'agbanyeghị na 2017 bụ afọ mbụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » AOC na-ekwuputa nkwado nkwado ya na G2 Esports